China is Zimbabwe's time-honored and reliable partner- FM » Spotlight Zimbabwe
China is Zimbabwe’s time-honored and reliable partner- FM
Emmerson Mnangagwa said, Zimbabwe and China enjoy a profound friendship and Zimbabwe regards China as a sincere and reliable friend. President Xi Jinping and I have met many times and decided to upgrade bilateral relations to a comprehensive strategic cooperative partnership. The Zimbabwean side is pleased with and proud of this new positioning. In Zimbabwe’s process of striving for national independence, safeguarding national sovereignty and opposing Western interference and sanctions, China has always extended firm support to Zimbabwe, which the Zimbabwean side will never forget. Zimbabwe appreciates China’s selfless assistance to Zimbabwe’s economic and social development and hopes that China will continue to help Zimbabwe speed up its economic reform and realize economic development. The Zimbabwean side firmly supports the One China principle and will continue to support the Chinese side on all issues concerning China’s core interests. The Zimbabwean side hopes to take the opportunity of celebrating the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations to deepen political mutual trust and upgrade practical cooperation with the Chinese side. The Zimbabwean side expects more Chinese investors to invest and start business in Zimbabwe, and believes that the two countries will enjoy broader development prospects.
Wang Yi said, China is Zimbabwe’s time-honored and reliable partner. President Emmerson Mnangagwa cherishes the friendship with China. The Chinese side highly appreciates Emmerson Mnangagwa’s personal attention to supporting Zimbabwe-China cooperation that has kept advancing the bilateral relationship to new highs. The Chinese side supports the Zimbabwean side’s efforts to safeguard its national sovereignty and dignity, supports the Zimbabwean side’s choice of a development path that is in line with its national conditions, and supports the Zimbabwean side’s just proposition that unfair sanctions against Zimbabwe should be lifted as soon as possible. The Chinese side is willing to see Zimbabwe develop friendly and cooperative relations and expand diplomatic exchanges with more countries. The Chinese side appreciates the Zimbabwean side’s valuable support on issues related to the Chinese side’s core interests, and will provide assistance to the Zimbabwean side within its capabilities and share China’s experience in state governance and administration without any reservation.